China Fireproof akpa rụpụta na Factory | Jiashun
Ihe ndị eji akwa akwa eji ekpuchi batrị nchekwa batrị bụ silicone roba, akwa iko iko, ihe nkiri aluminom, wdg.
Fireproof na waterproof - mere nke silicone ntekwasa ire ọkụ retardant iko eriri ákwà shei na aluminom film ákwà n'ime, nwere ike idi ruo 1000 ° C (banyere 1832 ° F) N'ihi ya, i nwere ike na-niile gị dị oké ọnụ ahịa 100% mma.
Fireproof na waterproof - mere nke silicone ntekwasa ire ọkụ retardant iko eriri ákwà shei na aluminom film ákwà n'ime, nwere ike idi ruo 1000 ° C (banyere 1832 ° F) N'ihi ya, i nwere ike na-niile gị dị oké ọnụ ahịa 100% mma. Okpomọkụ mkpuchi na akwa nguzogide okpomọkụ - ma nye akwa akwa na-eguzogide ọgwụ na okpomọkụ dị iche iche, dị ka akwa vermiculite, akwa akwa silica, igwe anaghị agba nchara waya wụsara akwa iko fiber, wdg. Wear eguzogide ọgwụ - akwa a na-etinye ọkụ na-eme nke eriri dị elu. Nkà na ụzụ ịkpa ákwà na-arụ ọrụ siri ike ma tozuru oke, ma nwee ọtụtụ afọ nke ahụmịhe bara ụba na teknụzụ mkpuchi, nke nwere ike ịkwado nnukwu nguzogide akwa na ogologo ọrụ ndụ nke akwa akwa ọkụ.
Ejiri maka akpa mkpuchi na mkpuchi ọkụ nke ụgwọ, agbụ, asambodo, ego, ego, akwụkwọ ndị dị mkpa, ihe dị oke ọnụ, batrị lithium, wdg.
[FIREPROOF & WATER RESISTANT BAG - Nchedo na Ọnọdụ niile]:N'iji FIBERGLASS nwere okpukpu abụọ, Akpa Ego anyị na-enweghị ego nwere ike iguzogide okpomọkụ dị ka 2000 F n'oge ụfọdụ (UL94 VTM-0). Ka ọ dị ugbu a, mkpuchi SILICONE + HOOK & LOOP CLOSURE na-eweta nchebe mmiri dị ukwuu. Anyị fireproof akpa ike ịlanarị ọkụ na ịrụ pụrụ ịdabere na nile ihu igwe ọnọdụ. Adabara ụlọ, ọfịs, njem, na MGBE MGBE, dị ka oké mmiri ozuzo, ajọ ifufe na ala ọma jijiji.
[OZI A NA-AHORT AKW FORKWỌ N'FORLỌ --LỌ - Paspọtụ, Asambodo, Ego, Ego & Ọla]:Nwere ọtụtụ obere ihe ọnụ? Amaghi ka itu ha n'uzo zuru oke. enwere ike ịhazi ya, akpa anyị obere akpa akpa a kapịrị ọnụ iji chekwaa paspọtụ gị, ego, akwụkwọ ozi, foto dị oke ọnụ, akwụkwọ, ọla, igodo, kaadị na ndị ọzọ. Site na imewe nwere ike, anyị nwere olile anya na ị nwere ike idobe ihe gị niile dị mkpa nke ọma kwadebere & Echekwa oge obula na ebe ọ bụla.
[NA-abụghị ITCHY SILICONE COATING - Super Easy for Home & Office Use]:A na-eji akpa ego anyị na-enweghị ọkụ na-ejikọ na NON-ITCHY SILICONE dị elu na akwa fiberglass.Ọ pụtara na ịchọghị uwe aka iji nweta ihe dị oke ọnụ ma banye. Akpa ego a na-enweghị ego ọ bụla dị mfe iji buru gburugburu, maka njem azụmahịa, ọfịs, ojiji ụlọ, wdg. Na 25% AKW HKWỌ HOK & LOOP CLOSURE, Akpa Ego Fire Fire anyị na-enye nchebe dị mma nke ihe bara uru karịa ndị ọzọ n'agbanyeghị oge na ebe ị jiri ya.
[Zuru oke dabara Jumbo FIREPROOF akpa - Honored Product]:Anyị bụ ndị ọkachamara na-enye TOP CLASS Akpa Fireproof na ahịa. Ngwaahịa ndị ọzọ JUMBO rụpụtara enwetawo nnukwu AKWREATKWỌ nke ichebe nnukwu ọnụ ahịa ndị ahịa. Ugbu a, akpa abụọ a nwere ike iji chebe obere ihe dị oke ọnụ, ha na-adaba anyị JUMBO FIREPROOF BAGS n'ụzọ zuru oke, ma na-enye Kachasị nchebe zuru oke na ahịa.
[AKWUKWỌ AKWUKWỌ NA AKW FIKWỌ AKWREKWỌ AKW ]KWỌ]:Ihe eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eme ihe anya, Ihe nkpuchi nke ndi Silicone, nkpuchi ahihia na nkpuchi, mmechi ego anyi enweghi ego, ma zuru oke maka iji ya eme ihe kwa ubochi. Biko rịba ama na anyị na-atụ aro ka ịchekwa akpa anyị na-enweghị ọkụ n'ime igbe nchekwa ọkụ maka nchekwa ọzọ.
Nke gara aga: Ihe mkpuchi
Osote: Fireproof ute